I-Sono-Electrochemistry nezinzuzo zayo - iHielscher
Lapha uzothola konke odinga ukukwazi mayelana ne-ultrasonic electrochemistry (sonoelectrochemistry): ukusebenza isimiso, izinhlelo zokusebenza, izinzuzo nemishini ye-sono-electrochemical – lonke ulwazi olufanele mayelana ne-sonoelectrochemistry ekhasini elilodwa.
Kungani Usebenzisa i-Ultrasonics ku-Electrochemistry?
Inhlanganisela yamaza asezingeni eliphansi, amandla aphezulu e-ultrasound anezinhlelo ze-electrochemical eza nezinzuzo eziningi, ezithuthukisa ukusebenza kahle kanye nezinga lokuguqulwa kokuphendula kwe-electrochemical.
Isimiso Esisebenzayo se-Ultrasonics
Ukusebenza okuphezulu kwe-ultrasonic processing, high-intensity, low-frequency ultrasound kwenziwa nge-ultrasound generator futhi kudluliswa nge-ultrasonic probe (sonotrode) ibe uketshezi. I-high-power ultrasound ibhekwa njenge-ultrasound ebangeni le-16-30kHz. Uphenyo lwe-ultrasound luyanwebeka nezinkontileka isib., Ku-20kHz, ngaleyo ndlela kudluliswe ukudlidliza okungama-20,000 ngomzuzwana kulowo ophakathi. Lapho amagagasi e-ultrasonic edabula kuketshezi, kushintshana ingcindezi ephezulu (ukuminyanisa) / ingcindezi ephansi (i-rarefaction noma ukunwetshwa) imijikelezo idala ama-bubbles omzuzu noma izimbotshana, ezikhula ngaphezu kwemijikelezo eminingi yengcindezi. Ngesikhathi sesigaba sokucindezelwa ketshezi namabhamuza, ingcindezi iba muhle, kanti isigaba se-rarefaction sikhiqiza i-vacuum (ingcindezi engemihle). Ngesikhathi semijikelezo yokwanda kokuminyanisa, izimbotshana ezikulolu ketshezi ziyakhula zize zifinyelele usayizi, lapho zingakwazi khona ukuthola amandla amaningi. Ngalesi sikhathi, bahamba ngamandla. Ukufakwa kwalezi zimbobo kuholela emiphumeleni ehlukahlukene enamandla, eyaziwa ngokuthi yinto ye-acoustic / ultrasonic cavitation. I-acoustic cavitation ibonakala ngemiphumela eminingi enamandla kakhulu, ethinta uketshezi, izinhlelo eziqinile / eziwuketshezi kanye nezinhlelo zegesi / uketshezi. Indawo yamandla aminyene noma indawo yokubamba iqhaza yaziwa njengendawo ebizwa ngokuthi indawo eshisayo, enamandla kakhulu endaweni eseduze ne-probe ye-ultrasonic futhi yehla ngamabanga akhulayo ukusuka ku-sonotrode. Izici eziyinhloko ze-cavitation ye-ultrasonic zifaka phakathi amazinga okushisa aphakeme kakhulu nezingcindezi kanye nokwehluka okuhlukile, iziphithiphithi nokusakazwa ketshezi. Ngesikhathi sokufakwa kwezikhala ze-ultrasonic ezindaweni ezishisayo ze-ultrasonic, amazinga okushisa afinyelela ku-5000 Kelvin, izingcindezi ezingafika kuma-200 atmospheres namajets wamanzi anama-1000km / h angalinganiswa. Lezi zimo ezivelele ezinamandla amakhulu zifaka isandla kumiphumela ye-sonomechanical ne-sonochemical eqinisa amasistimu kagesi ngezindlela ezahlukahlukene.
Ama-probe wamaprosesa we-ultrasonic I-UIP2000hdT (2000 watts, 20kHz) yenza njenge-cathode ne-anode esitokisini se-electrolytic
Imiphumela ye-Ultrasonic ekusetshenzisweni kwe-Electrochemical
Kwandisa ukudluliswa okukhulu
Ukuguguleka / ukusakazeka kokuqina (ama-electrolyte)
Ukuphazanyiswa kwemingcele eqinile / ewuketshezi
Imijikelezo ephezulu yengcindezi
Imiphumela ye-Ultrasonics ku-Electrochemical Systems
Ukusetshenziswa kwe-ultrasonication ekusebenzeni kwe-electrochemical kuyaziwa ngemiphumela ehlukahlukene kuma-electrode, okusho i-anode ne-cathode, kanye nesisombululo se-electrolytic. I-Ultrasonic cavitation nokusakazwa kwe-acoustic kukhiqiza ukunyakaza okuncane okubalulekile, okufaka ama-jets oketshezi nokuyaluza kuketshezi lokuphendula. Lokhu kuholela ekuthuthukisweni kwe-hydrodynamics nokuhamba kwengxube ketshezi / eqinile. I-Ultrasonic cavitation inciphisa ubukhulu obusebenzayo besendlalelo sokusabalalisa ku-electrode. Isendlalelo sokusabalalisa esincishisiwe sisho ukuthi i-sonication inciphisa umehluko wokuhlushwa, okusho ukuhlangana kokuhlushwa endaweni eseduze ne-electrode futhi inani lokuhlushwa kusisombululo esiningi likhuthazwa nge-ultrasonically. Ithonya lokuyaluza kwe-ultrasonic kuma-gradients okuhlushwa ngesikhathi sokuphendula liqinisekisa ukondliwa unomphela kwesixazululo esisha ku-electrode nokukhishwa kwempahla esetshenzisiwe. Lokhu kusho ukuthi i-sonication ithuthukise inani eliphelele le-kinetics elisheshayo lokuphendula nokwandisa isivuno sokuphendula.
Ngokwethulwa kwamandla e-ultrasonic ohlelweni kanye nokwakheka kwe-sonochemical kwama-radicals wamahhala, ukusabela kwe-electrochemical, obekungeke kube yi-electroinactive, kungaqalwa. Omunye umphumela obalulekile wokudlidliza kwe-acoustic nokusakaza ngumphumela wokuhlanza ezindaweni ze-electrode. Izendlalelo ezidlulayo nokungcolisa kuma-electrode kukhawulela ukusebenza kahle kanye nesilinganiso sokuphendula kokuphendula kwe-electrochemical. I-Ultrasonication igcina ama-electrode ahlanzekile unomphela futhi asebenza ngokuphelele ekuphenduleni. I-Ultrasonication yaziwa kakhulu ngemiphumela yayo ye-degassing, elusizo ekuphenduleni kwe-electrochemical, nayo. Ukususa amagesi angafuneki kuketshezi, ukusabela kungasebenza ngempumelelo enkulu.
Izinzuzo ze-Ultrasonically Promoted Electrochemistry
Ukwandisa isivuno se-electrochemical
SpeedEnhanced electrochemical reaction reaction
Ukusebenza kahle okuthuthukisiwe
Izinciphisi zokusabalalisa ezincishisiwe
Kuthuthukiswe ukudluliswa kwesisindo ku-electrode
Ukusebenza komhlaba ku-electrode
Ukususwa kwezendlalelo ezidlulayo nokukhohliswa
EntialUkunciphisa amathuba amaningi we-electrode 􏰭
Ukunciphisa isixazululo ngendlela efanele
Ikhwalithi ephezulu ye-electroplating
Uphenyo lwe-ultrasonic lusebenza njenge-electrode. Amagagasi e-ultrasound akhuthaza ukusabela kwe-electrochemical okuholela ekusebenzeni okuthuthukile, isivuno esiphakeme kanye namazinga wokuguqula ngokushesha.
Lapho i-sonication ihlanganiswa ne-electrochemistry, lokhu kuyi-sono-electrochemistry.
I-Sonoelectrochemistry ingasetshenziswa kuzinqubo ezahlukahlukene nasezimbonini ezahlukahlukene. Izicelo ezivame kakhulu ze-sonoelectrochemistry zifaka okulandelayo:
Ukuhlanganiswa kweNanoparticle (electrosynthesis)
Ukwelashwa kwamanzi angcolile
I-Ultrasonication iphumelele ukusetshenziswa ukuhlanganisa ama-nanoparticles ahlukahlukene ohlelweni lwe-electrochemical. Magnetite, cadmium-selenium (CdSe) nanotubes, platinum nanoparticles (NPs), gold NPs, metallic magnesium, bismuthene, nano-silver, ultra-fine copper, tungsten-cobalt (W-Co) alloy nanoparticles, samaria / ukunciphisa graphene oxide nanocomposite , i-sub-1nm poly (i-acrylic acid) ene-nanoparticles yethusi ehlanganiswe nezinye izimpushana ezilingana nano zikhiqizwe ngosizi kusetshenziswa i-sonoelectrochemistry.
Izinzuzo ze-sonoelectrochemical nanoparticle synthesis zifaka phakathi
ukugwema okwehlisa amanxusa kanye nama-surfactants
ukusetshenziswa kwamanzi njenge-solvent
ukulungiswa kosayizi we-nanoparticle ngamapharamitha ahlukahlukene (amandla e-ultrasonic, amandla wamanje, amandla okubekwa kanye nezikhathi ze-ultrasonic vs electrochemical pulse times)
U-Ashasssi-Sorkhabi noBagheri (2014) bahlanganise amafilimu e-polypyrrole sonoelectrochemically futhi baqhathanisa imiphumela namafilimu we-polypyrrole ahlanganiswe ngogesi. Imiphumela ikhombisa ukuthi i-galvanostatic sonoelectrodeposition ikhiqize ifilimu ye-polypyrrole (PPy) enamathela ngokuqinile futhi ebushelelezi, enesisindo samanje se-4 mA cm-2 ku-0.1 M oxalic acid / 0.1 M pyrrole solution. Kusetshenziswa i-sonoelectrochemical polymerization, bathole ukumelana okuphezulu namafilimu anzima e-PPy anendawo ebushelelezi. Kukhonjisiwe ukuthi ukumbozwa kwe-PPy okulungiselelwe yi-sonoelectrochemistry kunikela ngokuvikela okukhulu kokugqwala kwensimbi ye-St-12. Ukumbozwa okwenziwe kahle bekufana futhi kukhombisa ukumelana nokugqwala okuphezulu. Yonke le miphumela ingabangelwa ukuthi i-ultrasound ithuthukise ukudluliswa okukhulu kwama-reactants futhi yabangela amazinga aphezulu okusabela kwamakhemikhali nge-acoustic cavitation kanye namazinga aphezulu okushisa nezingcindezi. Ukuba semthethweni kwedatha ye-impedance yensimbi ye-St-12 / imidwebo emibili ye-PPy / isikhombimsebenzisi semidiya esonakalisayo kuhlolwe kusetshenziswa ukuguqulwa kwe-KK, futhi kwabonwa amaphutha aphakathi nendawo.
UHass noGedanken (2008) babike ngempumelelo eyi-sono-electrochemical synthesis of metallic magnesium nanoparticles. Ukusebenza kahle kwenqubo ye-sonoelectrochemical ye-Gringard reagent ku-tetrahydrofuran (THF) noma kusixazululo se-dibutyldiglyme kwakungu-41.35% no-33.08%, ngokulandelana. Ukungeza i-AlCl3 kusisombululo se-Gringard kukhulise ukusebenza kahle okukhulu, kwenyusa kwaba ngu-82.70% no-51.69% ku-THF noma ku-dibutyldiglyme, ngokulandelana.
Ukukhiqizwa kweSono-Electrochemical Hydrogen
I-electrolysis ekhuthazwa nge-Ultrasonically inyusa kakhulu isivuno se-hydrogen kusuka emanzini noma kuzixazululo ze-alkaline. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonically accelerated electrolytic hydrogen synthesis!
I-Electrocoagulation Esizwe Nge-Ultrasonically
Ukusetshenziswa kwe-ultrasound yemvamisa ephansi ezinhlelweni ze-electrocoagulcation kwaziwa njenge-sono-electrocoagulation. Ucwaningo lukhombisa ukuthi i-sonication inomthelela omuhle we-electrocoagulation isib, ekusetshenzisweni okuphezulu kokukhishwa kwama-hydroxide wensimbi emanzini angcolile. Umthelela omuhle we-ultrasonics ku-electrocoagulation uchazwa ukunciphisa kwe-electrode passivation. Imvamisa ephansi, ukuqina okukhulu kwe-ultrasound kufakwa ungqimba oluqinile futhi kuyisusa kahle, ngaleyo ndlela kugcinwe ama-electrode esebenza ngokuqhubekayo ngokugcwele. Ngaphezu kwalokho, i-ultrasonics isebenzisa zombili izinhlobo ze-ion, okungukuthi ama-cations nama-anion, akhona endaweni yokuphendula yama-electrode. Ukuxakaniseka kwe-Ultrasonic kuholela ekunyakazeni okuphezulu kwesisombululo sondla futhi sithathe impahla eluhlaza kanye nomkhiqizo uye nokubuya kuma-electrode.
Izibonelo zezinqubo ze-sono-electrocoagulation eziphumelelayo ukwehliswa kwe-Cr (VI) kuya ku-Cr (III) emanzini angcolile, ukususwa kwe-phosphorus ephelele emikhakheni ye-fine chemical industry nge-phosphorus ukususa kahle kwaba yi-99.5% kungakapheli i-10 min., ukususwa kombala nokususwa kwe-COD kokungcola kopulazi nomkhakha wephepha njll. Kubikwe ukusebenza kahle kombala, i-COD, i-Cr (VI), i-Cu (II) ne-P kwakungu-100%, 95%, 100%, 97.3%, no-99.84% , ngokulandelana. (bheka i-Al-Qodah & I-Al-Shannag, 2018)
Ukwehliswa kweSono-Electrochemical kokungcola
I-Ultrasonically ikhuthaza i-electrochemical oxidation kanye / noma ukusabela kokunciphisa kusetshenziswa njengendlela enamandla yokwehlisa ukungcola kwamakhemikhali. Izindlela ze-Sonomechanical ne-sonochemical zikhuthaza ukonakaliswa kwe-electrochemical kokungcola. I-cavitation ekhiqizwe nge-Ultrasonically ibangela ukuyaluza okukhulu, ukuxubana okuncane, ukudluliswa kobuningi nokususwa kwezendlalelo ezihamba phambili kuma-electrode. Le miphumela ye-cavitational iholela kakhulu ekuthuthukisweni kokudluliswa kobuningi obuqinile phakathi kohlobo lwama-electrode nesisombululo. Imiphumela ye-Sonochemical ithinta ngqo ama-molecule. Ukuqhekeka kwe-homolytic kwama-molecule kudala ama-oxidants asebenza kakhulu. Kuma-aqueous media naphambi komoya-mpilo, kwenziwa imishanguzo efana no-HO •, HO2 • no-O •. • Ama-radicals e-OH ayaziwa ukuthi abalulekile ekonakaleni kahle kwezinto eziphilayo. Sekukonke, ukonakala kwe-sono-electrochemical kukhombisa ukusebenza kahle okuphezulu futhi kufanelekile ukwelashwa imiqulu emikhulu yemifudlana yamanzi angcolile nolunye uketshezi olungcolisiwe.
Isibonelo, uLllanos et al. (2016) kutholakale ukuthi umphumela obalulekile wokusebenzisana utholwe ukutholakala kwegciwane emanzini lapho uhlelo lwe-electrochemical luqiniswa yi-sonication (i-sono-electrochemical disinfection). Lokhu kwanda kwezinga lokubulala amagciwane kutholakale ukuthi kuhlobene nokucindezelwa kwama-coli cell aggolomerates kanye nokukhiqizwa okuthuthukisiwe kwezinhlobo ze-disinfectant. U-Esclapez et al. (2010) ikhombise ukuthi i-reactor sonoelectrochemical reactor (nokho ayenziwanga kahle) isetshenzisiwe ngesikhathi kukalwa ukonakala kwe-trichloroacetic acid (TCAA), ukutholakala kwenkundla ye-ultrasound eyenziwe nge-UIP1000hd kunikeze imiphumela engcono 26%, ukukhetha 0.92 nokusebenza kahle kwamanje 8%) ngamandla aphansi e-ultrasonic nasekugelezeni kwevolumetric. Ngokubheka iqiniso, ukuthi i-pre-pilot sonoelectrochemical reactor ibingakenziwa ngcono, kungenzeka ukuthi le miphumela ingathuthukiswa kakhulu.
I-Ultrasonic Voltammetry ne-Electrodeposition
I-Electrodeposition yenziwa nge-galvanostatic ngobuningi bamanje be-15 mA / cm2. Izixazululo zifakwe ku-ultrasonication ngaphambi kwe-electrodeposition imizuzu engu-5-60. I-Hielscher I-UP200S probe-type ultrasonicator yasetshenziswa ngesikhathi sokujikeleza esingu-0.5. I-Ultrasonication itholwe ngokufaka ngqo iphenyo ye-ultrasound kusixazululo. Ukuhlola umthelela we-ultrasonic kusixazululo ngaphambi kwe-electrodeposition, i-cyclic voltammetry (i-CV) isetshenziselwe ukuveza isimilo ngokuziphatha futhi yenza kube nokwenzeka ukubikezela izimo ezifanele zokufakwa kwe-electrodeposition. Kuyabonakala ukuthi lapho isixazululo sikhonjelwa ku-ultrasonication ngaphambi kokubekwa kwe-electrodeposition, ukuthunyelwa kuqala ngamanani amancane angaba namandla. Lokhu kusho ukuthi njengamanje kusisombululo asidingi amandla amancane, njengoba izinhlobo ezisesixazululweni ziziphatha zisebenza kakhulu kunezingezona ezenziwa ngama-ultrasonicated. (isib. Yurdal & I-Karahan 2017)
I-Ultrasonic UIP2000hdT (2000 watts, 20kHz) njenge-Cathode kanye / noma i-Anode eTank
Ama-High-Performance Electrochemical Probes nama-SonoElectroReactors
I-Hielscher Ultrasonics ingumlingani wakho wesikhathi eside onolwazi wezinhlelo ze-ultrasonic ezisebenza kakhulu. Sakha futhi sisabalalisa ama-probe e-state-of-the-art ultrasonic kanye nama-reactors, asetshenziselwa umhlaba wonke ekusetshenzisweni komsebenzi onzima ezindaweni ezifuna kakhulu. Nge-sonoelectrochemistry, i-Hielscher ithuthukise ama-probe akhethekile e-ultrasonic, angenza njenge-cathode kanye / noma i-anode, kanye namaseli we-reactor e-ultrasonic afanele ukusabela kwe-electrochemical. Ama-electrode e-Ultrasonic namaseli ayatholakala kuma-galvanic / voltaic kanye nezinhlelo ze-electrolytic.